Madaxda Dowlad Goboleedyada qaar iyo Midowga Murashaxiinta ayaa kulan ku dhex maray… – Hagaag.com
Madaxda Dowlad Goboleedyada qaar iyo Midowga Murashaxiinta ayaa kulan ku dhex maray…
Posted on 11 Janaayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa Hotel Decale oo ku dhow Garoonka Aadan Cadde kulan dhawr saacadood qaatay kula yeeshay Midowga Musharaxiinta.
Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa Midowga Musharaxiinta ka dalbaday in ay soo gudbiyaan magacyada xubnaha ka midka ah Guddiga Doorashooyinka ee ay ka cabanayaan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada ay Midowga Musharaxiinta u sheegeen in ay ka shaqayn doonaan xalinta cabashadooda, ka hor inta aanay Dowladda Federaalka guda gelin hirgelinta doorashooyinka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dhinacyadaasi ay dhex martay dood adag, oo ka dhalatay Doorashada Xildhibaanada Gobolada Waqooyi iyo arrinta Gobolka Gedo. Midowga Musharaxiinta waxay dalbadeen in Doorashada Xildhibaanada Somaliland ka imaanaya looga dambeeyo Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo in Ciidamada Dowladda laga soo saaro Gobolka Gedo, dibna gobolkaasi loogu wareejiyo Maamulka Jubbaland.
Kulankan ayaa ku soo aadaya, xilli Musharax Daahir Maxamuud Geelle uu Axadii shalay sheegay in aanay soo gudbin doonin magacyada Xubnaha Guddiga Doorashooyinka.